युरोपियन सपनाको अनुभव गर्दै:5देशहरू अवश्य भेट्नु पर्छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा आइसल्याण्ड > युरोपियन सपनाको अनुभव गर्दै:5देशहरू अवश्य भेट्नु पर्छ
(Last Updated On: 15/01/2022)
युरोप जीवन्तको सम्बन्धमा अग्रणी महाद्वीप हो, बस्न योग्य, र रमाईलो भरिएका आधुनिक शहरहरू. त्यहाँ वास्तु आश्चर्यको प्रशस्तता छ, संग्रहालयहरु, र प्रत्येक युरोपेली देशहरूमा रेस्टुरेन्टहरू जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ. नाइट लाइफ र महाद्वीप भर खाद्य दृश्य कुनै पछाडि आउँदैन. महाद्वीपमा वन्यजन्तुहरू र प्राकृतिक आकर्षणहरू दुस्सुक्क र पहुँच गर्न सजिलो छ. र किनभने EU कारक र महाद्वीप वरिपरि उच्च-गुणवत्ता सडक नेटवर्कहरू, सडक ट्रिपर्सका लागि सम्पूर्ण महाद्वीपलाई केवल एक स्वीपमा अन्वेषण गर्न यो सजिलो छ. यूरोपियन सपनाको अनुभव लिन तपाई भाडाको कार वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
के तपाईंलाई आईडीपी चाहिन्छ? (अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभको इजाजतपत्र) युरोपमा ड्राइभ गर्न?
राम्रो, केहि देशहरू जस्तै इटालीमा विदेशी ड्राइभरहरूको आवाश्यक हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभर इजाजतपत्र ड्राइविंग प्रवीणताको प्रमाणको रूपमा. यो माग नगर्ने देशहरूमा पनि इजाजतपत्र ल्याउन राम्रो छ किनभने तपाईंलाई स्थानीय कार भाडा एजेन्सीहरू र ट्राफिक पुलिसलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ कि तपाईं एक सभ्य चालक हुनुहुन्छ।. पनि, यात्रा अघि, सीडीसीको साथ जाँच गर्नुहोस् कि यो कुरा निश्चित गर्नका लागि कि हामीले यहाँ छलफल गरेका गन्तव्यहरू महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभाव नपार्न सक्छन्. भनेर मनमा संग, यहाँ को एक सूची छ5युरोप मा देशहरू भ्रमण गर्नु पर्छ.
सान्तोरीनीमा आएका मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि यो शहर यूरोप मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वमा सब भन्दा रोमान्टिक स्थान हो. यो नवविवाहित जोडीलाई खोज्नका लागि उत्तम छ हनीमून गन्तव्य. तपाईं अद्भुत क्याल्डेरा दृश्यहरू र सूर्यास्तद्वारा मोहित हुनुहुनेछ. तपाईं हाइक गर्न सक्नुहुन्छ, डु boat्गा यात्रा मा जानुहोस्, वा सहरको कालो ज्वालामुखी समुद्र तटहरूमा दिउँसो आरामदायी छ. यदि तपाईं बोतल मन पराउनुहुन्छ, तपाइँ नमूना मन पराउनुहुनेछ स्थानीय मदिरा सँगसँगै भूमध्य. सान्तोरीनी अल होग्रीस मा सबै भन्दा विलासी होटल को त घर.
2. युरोपेली सपनाको अनुभव: ताल नाइस, इटाली
ताल कोमो यसको अनन्त विविध प्रकारको सुन्दर भिल्ला र गाउँहरूको लागि लोकप्रिय छ, स्वादिष्ट खाना (त्यो तिमी हो, इटालियन पिज्जा?), र अद्भुत फोटोग्राफी क्षेत्र, ती सबै दैनिक फेरी सेवाहरू द्वारा एक अर्कासँग जोडेको छ. यदि तपाईंसँग समय र खाली अतिरिक्त डलर छ भने, तपाईं एक मोटरबोट भाडामा लिन सक्नुहुन्छ र Bellagio को सानो शहर को सवारी गर्न सक्नुहुन्छ. अन्य तरिकाहरूमा, तपाईं पनि एक हिंड्न वा लिन सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहोस् ग्यासले चालु साइकल र आफैंले सुन्दर दृश्यको आनन्द लिनुहोस्. यहाँको जलवायु सबै वर्ष अद्भुत छ र यस क्षेत्रको बिछ्याइएको संस्कृतिको कारणले (त्यहाँ धेरै पर्यटक छैनन्), तपाईं आफ्नो सामान्य जीवनको कष्ट र मोलबाट भाँच्ने उत्तम अवसर पाउनुहुन्छ. लेक कोमोसँग पनि हनीमूनिंगका लागि पर्याप्त रोमान्टिक Vibe छ.
3. रेएकजाभिक, आइसल्याण्ड
आइसल्याण्डको राजधानी रिक्जाविक यात्रुहरूका लागि उत्तम यूरोपियन शहरहरू मध्ये एक हो, धेरै कारणका लागि. यदि तपाईं ईतिहासबाट मोहित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ रेखजाविकलाई यसको सुन्दर र धनी संग्रहालयहरूको लागि मनपर्नुहुनेछ वाइकिंग समुद्री संग्रहालय, आइनर जोन्सन संग्रहालय, र कला संग्रहालय. राजधानी शहर पनि आकर्षण को एक अद्भुत सरणी द्वारा घेरिएको छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रवेश पोर्ट बनाउने. तपाईं लाभा पोइन्ट्स सहित थुप्रै भौगोलिक चमत्कारहरू देख्नुहुनेछ र अनुभव लिनुहुनेछ, झरनाहरु, र निलो लगून. चट्टानहरु, ग्लेसियर, बलौटे तटहरू, र ज्वालामुखीहरु पनि रिकजाभिक आसपासका परिभाषित.
Foodie रत्नहरूको लागि, तपाइँ सुशी साम्बा र बाजेरिन्स बेज्टु पाइल्सुर जस्ता ठाउँहरूमा परम्परागत आइसल्याण्डिक फूडहरूको विस्तृत श्रृंखला चाख्न मनपर्नुहुनेछ।. यदि तपाइँ समुद्री वन्य जीवनलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईं रेखजाभिकको पुरानो बन्दरगाहमा व्हेल हेर्दै जान सक्नुहुन्छ, घर मा 20 बिभिन्न व्हेल प्रजातिहरू. तपाईं डल्फिन पनि देख्न सक्नुहुनेछ, puffins, र पोर्पोइज, अन्य समुद्री वन्यजन्तुहरूको बीचमा.
4. युरोपियन सपनाको अनुभव गर्दै: प्राग, चेक गणतन्त्र
धेरै पर्यटकहरू प्रागलाई यसको आश्चर्यजनक घटनाहरूको लागि मन पराउँछन्, छुट्टी परेड देखि दैनिक वर्ष देखि वर्ष परेड गर्न. केहि रमाईले भरिएका घटनाहरू जुन तपाईंले प्रागमा समावेश गर्नुपर्दा बोहिमियन कार्नेभेल समावेश गर्नुहुन्छ जब तपाईं फेब्रुअरीमा शहर भ्रमण गर्नुहुन्छ।, वा चेक बीयर महोत्सव जब मे मा भ्रमण. यहाँको रात्रि जीवन पनि मान्छेहरूको भ्रमणको प्रमुख कारण हो, ज्याज क्लबहरू र अन्यसँग प्रत्यक्ष संगीत मनोरञ्जन दृश्य हावी. वार्षिक प्राग वसन्त अन्तर्राष्ट्रिय संगीत महोत्सव प्राग मनोरन्जन हाइलाइट मध्ये एक हो. तपाईं राती पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ शहरको चारैतिर कडा सुरक्षा को कारण. यदि तपाइँ कला र इतिहास मन पराउनुहुन्छ, मुचा संग्रहालय वा काफ्का संग्रहालयको भ्रमणले तपाईंको लागि ट्रिक गर्नेछ.
5. यूरोपीयन सपना अनुभव: पेरिस, फ्रान्स
प्रसिद्ध स्थलचिह्नहरूको टन, अन्तहीन किनमेल अवसरहरू, स्वादिष्ट खानाको एक विस्तृत श्रृंखला, धनी इतिहास, र कला संग्रह, साथ साथै विश्व-स्तरीय पार्क र बगैंचाहरूले पेरिसलाई भीडबाट अलग राख्छ. Some of the landmarks that you need to see आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एक पटक एफिल टावर समावेश छ, पवित्र हृदय बेसिलिका, चाप डी ट्रायोम्फे, लुभ्रे संग्रहालय, र पालाइस गार्नियर. यदि तपाईं एक शपिंग उत्साही हुनुहुन्छ, तपाइँ रुई डु कमर्समा उच्च-अन्तमा पेरिसियन फैशनिस्टासको साथ काँधमा मलालन मनपराउँनुहुनेछ, बुलेभार्ड सेन्ट जर्मेन, र अन्य लक्जरी किनमेल सडकमा. र यदि तपाइँ कला मन पराउनुहुन्छ, नमूना बनाउन पेरिस वरपर बिभिन्न कला संग्रहहरू छन्, Musee d'Orsay सहित, म्यूजे नेशनल पिकासो, र musee du Quai Branly.
युरोप कहिल्यै "बकेट सूची" शहरहरू र पर्यटन शहरहरूको छोटो छैन. यो सबै तपाइँको बजेटमा निर्भर गर्दछ, समय, र भ्रमणको उद्देश्य. यस सूचीले तपाईंलाई महाद्वीपमा सब भन्दा चित्त बुझाउने ठाउँहरू पत्ता लगाउनका लागि ढोका मात्र खोल्दछ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं5युरोपमा काल्पनिक देशहरू. यूरोप भरिको रेल यात्रा रेल द्वारा यात्रा गर्न उपयुक्त छ.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपियन सपना:5तपाईको साइटमा युरोपमा अवश्य देशहरू अवलोकन गर्नुहोस्? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
सपना सपना साकार हुनु युरोपियन प्रवाह MustVisitCountriesInEurope TravelbyCar travelbytrain ट्राभलचेकराज travelfrance यात्रा